ငြိမ်းချမ်းအေး – ကံကောင်းပါစေ ဗမာပြည် | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းအေး – ကံကောင်းပါစေ ဗမာပြည်
‘NLD’ အလံထောင်ပြီး ဆိုက်ကားနင်းနေတဲ့
ဈေးထိပ်က ခွပ်ဒေါင်း တလွင့်လွင့်နဲ့
‘ဘဝပေးအသိ’ နဲ့ ‘မျှော်လင့်ချက်’ က လာတယ်၊
‘ရန်သူ’ ‘မိတ်ဆွေ’ ကွဲတယ်၊
‘ဓမ္မ’ နဲ့ ‘အဓမ္မ’ စည်းခြားတယ်၊
‘အဖြူ’ ‘အမည်း’ ထင်ရှား သိမြင်တယ်၊
‘အမှား’ နဲ့ ‘အမှန်’ ကွဲပြားတယ်။
အဆိုး-အကောင်း ခွဲ ‘ခြစ်’ တတ်ခဲ့တယ်..။
လမ်းပေါ်မှာ၊ မဲရုံမှာ၊ နေရာတိုင်းမှာလည်း
ဗမာပြည် လူထု လူမျိုး ဘာသာစုံလောက်
တာဝန်ကျေတဲ့ ပြည်သူမျိုး မရှိဘူး..။
နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ကြမ္မာဆိုး ခရီးကြမ်းလမ်း၊
‘နိုဝင်ဘာမှာ စိုက်ပျိုးပါ’ ဖွဲ့ခဲ့တယ်..။
စိုက်သမျှ မရိတ်နိုင်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ ??
ဒီမေးခွန်းလည်း သမိုင်းလှန် မေးဖို့ လိုတယ်..။
လူတစု ပါတီ အလိ (Elite) ပါတီ၊
Technocrats များနဲ့ သာယာနေတဲ့ ပါတီ၊
မျက်မွှေးထော် မော်လို့ မကြည့်ဝံ့တဲ့ ပါတီ
စစ်စစ် ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်..။
‘အမေယိမ်း’ မကကြဖို့လည်း လိုတယ်။
ဓမ္မ၊ တရားမျှတမှု၊ အမှန်တရားနဲ့
အဓမ္မ၊ မတရားမှု၊ အမှားအစုစုသည်
၂၀၁၂ ‘ဧပြီအရူးများနေ့’ အပြီး
ဒါပေမဲ့ ၃ နှစ် အကြာ..
ခေတ် ‘ကောင်း’ လို့
‘April Fools’ နဲ့ အတူ
ကမ္ဘာ့ ကာလသား ပန်းဦးဆွတ်ချင်သူတွေ
ကိုကာကိုလာ၊ ကေအက်ဖ်စီ၊ ကေပေါ့
ဘုန်းတော်ကြီး တူးတူး အလယ်
မိုက်ကယ်လန်း အဆုံး ဦးခိုက်ရတဲ့
နံပါတ်တုတ်ပြီး၊ ကျည်ဆန်ပြီး၊ မီးကွင်းဆေးထိုးရတဲ့
ကားမော်ဒယ်အသစ်တွေ မသွင်းရရင် ဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်၊
‘သူတောင်းစား ထမင်းဝ’ သောကတွေနဲ့
‘နောက်ပြန်လှည့် အကြောက်’ တရားကို
ဒီမိုကရေစီ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ‘အမြိုက်’ တရားအလား
အတွင်တွင် ဟော .. ‘ခြောက်’ ခဲ့ကြတဲ့
လူတန်းစားပျက်တွေရဲ့ တံတွေးခွက် ပက်လက်မျောခဲ့ရ၊
လူ့ကပ်ပါးတွေရဲ့ အငြူစူ၊ အစောင်းမြောင်းခံရ၊
လူ့အန္ဓ ဗာလာနံတွေရဲ့ ပြက်ရယ်ပြု ခံရ၊
စစ်အရင်းရှင်ခရိုနီရဲ့ လူထုဇက်ပေါ် ဝဲမြဲ ဝဲမယ့် “ဓား” အတွက်
မီးလောင်ဗုံးဒဏ်ခံ နင်းပြား အငတ်ထုကြီးရဲ့
‘ကျော’ တွေ ‘တံတား’ လို ချနင်းခံခဲ့ရတဲ့
ဖောင်းနေတဲ့ တုံးအောက်က ဖားများ
‘Facebook Elite’ တစု
‘Facebook’ နိုင်ငံရေး၊ မဲဆွယ်ရေး
အမှန်တရား ‘မှန်’ နိုင်ပါစေ..။
အမှန်တရား ‘နိုင်’ ပါစေ..။
Good Luck Burma!
Good Luck Her Oppressed People!
အဖိနှိပ်ခံ လူမျိုး ဘာသာစုံ
စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅
မှတ်ချက် – ‘၂၀၁၃ ဧပြီအရူးများ’ ကိုယ်တိုင်ရေး ကဗျာဟောင်းကိုလည်း ပြန်လည်သုံးထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၅ – ဆိုက္ကားပေါင်း အနည်းဆုံး ၃ဝဝ ထက်မနည်းဟာ ဒီကနေ့မှာတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ပါတီအလံတွေ၊ တံဆိပ်တွေကို ဝတ်ဆင်ပြီး ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကနေ မင်္ဂလာဈေးတစ်လျှောက်ကို လှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံပိုစတာတွေ ကိုင်ဆောင်ထားပြီး သူတို့တွေဟာ မင်္ဂလာ တောင် ညွှန့်မြို့နယ်ထဲမှာ ထောက်ခံရေးအင်အားကို ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ – ကျော်ဇင်သန့်/ကမာရွတ်မီဒီယာ)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ, ငြိမ်းချမ်းအေး